गुल्मीमा प्रहरीले लाठी चार्ज र अस्स्रु ग्यास प्रहार गरेको LIVE – Complete Nepali News Portal
गुल्मीमा प्रहरीले लाठी चार्ज र अस्स्रु ग्यास प्रहार गरेको LIVE
December 16, 2016	1,046 Views
गुल्मी, पौष–१ । झण्डै तिन साता व्यापी शान्तिपुर्णं आन्दोलनबाट ५ नम्वर प्रदेश टुक्राउन पाईदैन भन्ने माग सरकारले सुनुवाई नगरेको भन्दै आज देखि सुरु गरिएको आक्रमक आम हड्तालले गुल्मी जिल्ला तनाव ग्रस्त बनेको छ । जिल्ला प्रशासनमा ताला ठोक्दै आन्दोलनकारीले एक जना कर्मचारी पनि छिर्न नदिई कव्जा जमाएका छन् ।
५ नम्वर प्रदेशको जिल्ला घोषणा गरिएको वोर्ड हिजो सम्म गेटमा थियो भने आज प्रशासनको भित्रै अग्रभागमा लगेर टाँगिएको छ । जिल्ला प्रशासनको प्रतिकृया माग्दा प्रजिअ कृष्णप्रसाद ढुङ्गनाले फोन उठाएका छैनन् । ठुलो सख्यामा सुरक्षा निकाय थैनाथ गरिए पनि आन्दोलनकारीको घेरा तोडेर प्र.जि.अ. लगायतका कर्मचारी भित्र छिर्न सकेका छैनन्।
यहाँका सवै शैक्षिक संस्था, यातायात सेवा, व्यापार व्यवसाय पुरै ठप्प पारिएको छ भने मेडिकल समेत बन्द गरिएको छ । आम हड्ताल आज देखि तिन दिन सम्मका लागि घोषणा गरिएको छ । यसबाट पनि सुनुवाई नभए सरकार विरुद्ध यो भन्दा पनि कडा आन्दोलन घोषणा गरिने चेतावानी संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक भुवनप्रसाद श्रेष्ठले दिएका छन्।
यो भिडियो पनि हेरी दिनु होला !!!